Uhlelo lokuzibophezela 5: Ukuzinikela kwebhizinisi elivulekile nokwethembekile 1.Our yethu iqinisa ngokwakha ukwakhiwa kwezikweletu nokuzikhuza, ilandela umthetho ngokuqinile ngokuvikelwa kwamalungelo nezintshisekelo zabathengi, yenza izibopho zabasebenza ngebhizinisi ngenkuthalo, .. .
UKuala Lumpur, Ephreli 6 (AFP) - kusukela nge-12 PM namuhla, abakwa-coronavirus abaseMalawi sebeqinisekise amacala ayi-131 nokufa kwabantu abangama-62, nokuletha inani lamacala aqinisekisiwe ku-3,793. Namuhla, bangu-236 abantu abakhishwe esibhedlela, okuthe isibalo samacala abuyiselwe kubantu abayi-1,241. Ngaphezu kwalokho, a ...
Umqondo owodwa wokuvikela nokulawula ubhubhane — I-HEBEIPUKANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD. wanikela ngempahla nezinto zokwakha ukulwa ne-COVID-19
UNyaka oMusha uqala ngo-2020, Ukusabalala kanye nokuthuthuka kwe-COVID-19 kuthinta izimpilo ezijwayelekile zemindeni eminingi. Abasebenzi bezempilo eWuHan nakwezinye izindawo ezweni lonke basebenza eqhamuka phambili ekunqandeni nasekulawuleni ubhubhane.Ukuze bavikele kangcono impilo yabantu, iXuShui ...